रहेनन् आइटी बाबा उपाध्‍याय
अन्नपूर्ण मंगलवार, कात्तिक १४, २०७४ 10291 पटक पढिएको
एक्स्टी कम्प्युटरदेखि ब्राण्डिङ एक्सोसम्‍मका संयोजक
काठमाडौं: नेपालको सूचना सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा आइटी बाबाको रुपमा परिचित सीएन उपाध्यायको ५७ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।२५ वर्षदेखि क्रियाशील उपाध्यायको मंगलबार बिहान एक कार्यक्रम सकेर फर्कदै गर्दा बाटोमा लडेर निधन भएको हो। उनको मंगलबार नै पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिएको छ।
कम्प्युटर व्यवसायीको रुपमा यो क्षेत्रमा आएका उनी कम्प्युटर एशोसिएन अफ नेपाल हालको क्यान महासंघका संस्थापक सदस्य हुन्। नेपालमा पहिलो पटक सूचना प्रविधि एक्स्पो सुरु गर्न उनले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्। आइसिटी एशोसिएन अफ नेपालको सहसंस्थापक एवं कोषाध्यक्ष समेत रहेका उनी नेकपा एमालेका सक्रिय कार्यकर्ता समेत थिए।उनी आधादर्जनभन्दा बढी संघसंस्थामा क्रियाशील थिए।
को हुन् सीएन उपाध्‍याय?
सीएन उपाध्‍याय पर्वत जिल्लाको एक दुर्गम बस्तीमा सन् १९५९ अक्टुबर १८ तारिखमा जन्मिएका हुन्। उपाध्यायले प्राथमिक शिक्षा आसामबाट प्राप्त गरेका थिए। भूगोलमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका उपाध्यायले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा परेर, देखेर र गरेर धेरै कुरा सिकेका हुन्।
आसामको शिक्षा र नेपालको कार्य अनुभवले उनलाई जीवनमा धेरै कुरा सिकायो। वि.स.2०३८ सालमा काठमाडौं प्रवेश गरेपछि उनले केन्द्रिय तत्थांक विभागमा काम गर्ने अवसर पाए। जनगणना र तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपालमा पहिलोपटक सोही सालमा आइसिएल १४०१ नामक कम्प्युटर मेन फ्रेम भित्रिएको थियो।
बेलायत सरकारबाट सहयोग प्राप्त आइसिएल कम्प्युटरमार्फत सुरु भएको ‘राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र'बाट कम्प्युटरको जगतमा उनले काम थाले। त्यसपछि सहयोगी प्रेश, रिकास्ट, मोरङ अटोवक्र्सलगायतमा कार्य सक्रिय भए। वि. स. ०४२ देखि नेपाल स्टक एक्स्चेंजमा स्थायी जागिरे पनि भए।
करीब २१ वर्षसम्म त्यहाँ काम गरिसकेका उनले स्टक एक्स्चेंजलाई नै कम्प्युटराइज प्रविधिमा लैजाने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। त्यतिबेला उनले जागिरे जीवनसँगै कम्प्युटर इन्स्टिच्युट र आइटी व्यवसाय पनि सुरु गरिसकेका थिए।
त्यसबखत, नेपालमा भित्रिएको एक्सटी कम्प्युटर अत्यन्तै राम्रो र भर्खरको मानिन्थ्यो। एक्सटीमा पढाइ हुने इन्टिच्युट भनेर विज्ञापन गरिन्थ्यो। उनले त्‍यतिबेला ४० वटाजति एक्सटी कम्प्युटर बनाएर बेचेका थिए।
प्रविधिमा काम गर्दै जाँदा उनले सहकर्मी सहकर्मी दीपक थापासँगको पहलमा मे २, १९९२ मा क्यानको स्थापना गरे। जुन दिनलाई सम्झँदै अहिले क्यानले प्रत्‍येक वर्ष आइसिटी डेका रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ। एक वर्ष काम गरे र यसको भविष्‍य उज्जवल देखेपछि सन् १९९४ को फेब्रुअरीमा सञ्‍जीव राजभण्डारी अध्यक्ष र सिएन उपाध्याय कोषाध्यक्ष रहेको ९ सदस्यीय कमिटी बनायो।
यसपछि सन् १९९५ मा होटल ब्लुस्टारबाट सुरु भयो क्यान इन्फोटेक। जुन अहिले पनि क्‍यानले १८ औ संस्करण सम्पन्‍न गरिसकेको छ। क्यान इन्फोटेकको कन्सेप्ट सुरु गर्ने उपाध्यायले १३ वटा इन्फोटेकको संयोजन गरेका थिए। आइटी एक्स्पोको सुरुवातकर्ता उपाध्यायले विगत पाँच वर्षदेखि आइसिटी इन्फोट्रेडको संयोजन गरिरेका थिए।
लामो समयसम्म क्यानमा रहेका उनले सन् २००७ मा उक्त संस्था छाडे। क्यानका आर्थिक गतिविधिलगायत काम व्यवस्थित हुन नसकेपछि सागरदेव लाखे, रामशरण पाण्डे, शिशिर उपाध्याय, भेषराज पौडेल, रोशन भण्डारी लगायतको समूहले आइसिटी एसोसिएसन अफ नेपाल सुरुवात गरे।
आइसिटी एसोसिएसनले पनि पाँचवटा आइसिटी इन्फोट्रेड ब्रान्डिङ एक्स्पो सीएनकै संयोजनमा आयोजना गर्न सफल भयो। साथै उनले आइसिटी एसोसिएसनमा कोषाध्यक्ष र जुम इभेन्ट मेनेजमेन्टका अध्यक्ष भएर काम गरिरहेका थिए।
आइसिटीको क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका उपाध्यायले आधा दर्जन बढी अवार्ड र पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेका छन्।आइटीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेबापत् सन् २००१ मा क्यानले उनलाई सम्मान गरेको थियो। त्यसैगरी बेस्ट म्यानेजमेन्ट क्यान इन्फोटेकबाट सन् २००५ मा सम्मानित भएका थिए।
अनेक प्रश्नमा कांग्रेस 260
‘भिजन सिन्ड्रोम'को बढ्दो समस्या 370
इटहरी उपमहानगरका फाइल अख्तियारको कब्जामा 1335
सप्तरीमा महिलाको हत्या 682
प्रचण्ड रौतहट बम काण्डका घाइते आमा छोरा भेट्न अस्पतालमा 8892
केशव स्थापितविरुद्ध घुस मुद्दा 14658